पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, के छ अवस्था ? — Sanchar Kendra
१विवाहभोज खाएपछि कोरोना संक्रमण, एकै घरका ३ जनाको मृत्यु
२ओलीले सपथ ग्रहण गरेलगत्तै प्रचण्ड र नेपालबीच गोप्य भेटवार्ता, के बिषयमा भयो कुराकानी ?
३तिब्र गतिमा फैलिदै कोरोना, बाँकेमा दुई घण्टामा ५ संक्रमितको मृत्यु
४प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै ओलीले गरे मन्त्रीमण्डल बिस्तार, काे-काे बने नयाँ मन्त्री ? नामलिस्टसहित
५प्रधानमन्त्री ओलीले लिए पद तथा गोपनियताको शपथ
६ओली क्याबिनेटका क-कसलाई खुवाइदैछ सपथ ?
७गण्डकीमा कोरोना संक्रमणको डरलाग्दो अवस्था, ९४ जनाको मृत्यु
८माधव नेपालले किन बोलाए बैठक ?
९ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक
१०ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले के भने ?
११कोरोना नियन्त्रणमा विश्वभर चर्चामा रहेकाे भुटानी मोडल
१२जङ्गलमा यस्तो काण्ड मच्चाइरहेका बेला अचानक प्रहरी पुगेपछि भयो दोहोरो भि’डन्त
काठमाडौँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र उनकी पत्नी कोमल शाहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । भारतको हरिद्वारमा लागेको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किएका शाह दम्पतीमा कोरोना पुष्टि भएको हो ।
उनीहरुले स्वदेश फर्किएपछि कोरोना संक्रमण परीक्षण गराएका थिए । परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ । उनीहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम पनि शुरू भएको छ । यसअघि सोही कुम्भ मेलामा सहभागी भएका भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्य पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका थिए ।
अन्तत: देउवा र प्रचण्डबीच भयो यस्तो सहमति